हिन्दू समाज अष्ट्रेलियाले भर्चुअल भागवत महापुराण आयोजना गर्दै ! « MNTVONLINE.COM
हिन्दू समाज अष्ट्रेलियाले भर्चुअल भागवत महापुराण आयोजना गर्दै !
आगामी मंसिर ८ गते अर्थात् नोभेम्बर २४ तारिखदेखि भर्चुअल भागवत महापुराण आयोजना हुने भएको छ । नेपाली हिन्दू समाज अष्ट्रेलियाको आयोजनामा हुन लागेको यो महापुराण मुख्यत महामारीका कारण हतास समाजलाई आध्यात्मिक जागरण गराई उत्साहित गराउन पहिलो पटक भर्चुअल माध्यमबाट हुन लागेको हो । महायज्ञका संकल्पकर्ता प्रकाश ढोडारीका अनुसार ८ गते देखि १५ गतेसम्म हुने यस कथा वाचनलाई विश्वभरीबाट हेर्न र सुन्न सकिनेछ ।
महापुराणलाई चर्चित कथाकार पं कुबेर सुबेदीले वाचन गर्दैछन भने सांङ्गितिक प्रस्तुति लोकप्रिय भजन गयक राजु अधिकारी र गायिका मेनुका पौडेल लगायतका कलाकारले दिनेछन् । यस कार्यक्रमबाट प्राप्त सहयोगबाट ३१ वटा गुरुकुलममा ५०० जना बिद्धार्थीहरुलाई सहयोग का साथै पशुपति क्षेत्रमा निशुल्क भोजन सेवाको लागि खर्च गरिनेछ ।